China Yakasarudzika saizi yakavhenganiswa yemavara bhiza marble zvifananidzo Kugadzira uye Fekitori | Unyanzvi Hwakanaka
Model Nhamba: FMI-219
Saizi: yakagadzirirwa saizi
Chinyorwa: zvakasikwa Marble
Bhiza rakanaka rine makumbo mana makobvu uye akaenzana zvakanaka. Muviri unotsvedzerera, kunge wakazorwa mafuta uye unopenya. Bvudzi riri mumutsipa rinorembera pasi zvakateedzana.
Nzeve mbiri dzakasimudzwa, dzichiteerera kufamba kwakatenderedza chero nguva, sekunge yakamira. Maziso maviri mahombe anogara achitenderera padyo, muswe murefu dzimwe nguva unorembera pasi, dzimwe nguva unotenderera nedivi, uye makumbo mana marefu anoita kunge mbiru ina gobvu dzine simba guru.
Bhiza reArabhiya rudzi rwekare uye rwakakosha bhiza munyika. Archaeology yakawana kuti zvakatangira makore mazana mashanu nemazana mashanu apfuura, chizvarwa cheArabia Peninsula. Iyo yakanyatso sarudzwa uye yakaberekwa kwenguva yakareba pasi pemamiriro ekusanaya kwemvura, mvura shoma uye kushomeka kwechikafu. Iri bhiza rakaita basa rakakosha mukuumbwa kwemhando zhinji dzemhando yepamusoro dzemabhiza munyika. Kukwana mabhiza, maOrrov mabhiza, Morgen mabhiza, nezvimwewo, ese ane ropa remabhiza eArabia.
Wepakati bhiza ane 24 vertebrae, ukuwo bhiza reArabia riine 23 chete.Musoro mudiki uye wakachena, maziso makuru uye akajeka, mutsipa wakatwasuka, huma yakafara, nhumbi dzakakwirira, musana uye chiuno zvipfupi. uye akasimba, mapfupa akaonda uye akasimba, mitezo yakaonda, marunda akavandudzwa, uye muviri wakaoma, bhachi rakapfava sesiriki, uye kugona kubereka kwakasimba. hupenyu hurefu. Chimiro chemuviri chakanyatsoenzana uye chakanakisa. Iro bhiza repamusoro-soro rinotasva nemakwikwi emabhiza eArabia. Yayo pfupi-daro kumhanya haina kunaka senge yeChirungu yakakwenenzverwa, asi iyo refu-refu nhangemutange yakanaka. Nekuda kwechitarisiko chayo chakanaka uye kugona kwakasimba, mamwe marudzi anovimba nekuunzwa kwemabhiza eArabia kuti avandudze chitarisiko chavo nekuvandudza kugona kwavo.
Mabhiza eArabia akachinja uye akakura mumamiriro ekunze erenje. Ivo vanoonekwa sepfuma nemaBedouin. Vanowanzoendeswa kumba uye vanochengetedzwa mumatende. Nekuda kwehukama hwavo hwepedyo nevanhu, ivo vane mutsa, vakangwara uye vanoda kufadza. Ivo zvakare vane yakakwira mwero yesimba repfungwa nekusvinura, uye vanokodzera kurwisa nehondo. Nekuda kwekusanganiswa uku kwekuzvidzora uye kunzwisisika, varidzi vemabhiza veArabia vemazuva ano vanofanira kubhadhara kushivirira kwakakwana uye kuremekedza kuvadzora.
Iyi inofadza Arabian stallion yakaisvonaka uye inoyevedza, inoratidzwa mune yakanaka yakavhenganiswa machena. Iyo yakanakisa hunyanzvi yakagadzirwa neuyu muenzi ine yakanakisa ruzivo uye chaiyo chaiyo. Nechigadziko chakakona semashure, pakarepo chiwedzere kune chako chekushongedza kwekunze.
Pashure: Yakasarudzika saizi nhema machena machena gondo marble zvifananidzo zvekutengesa
Zvadaro: Yakanaka mhando chena ruvara Marble Bhiza
Ruvara rwepingi famba shumba chifananidzo chiri kutengeswa
White Marble Winged Shumba Statue ine mwenje wekutengesa
Yakasarudzika dema machena machena gondo marble zvifananidzo ...
White Marble Shumba Mhuri Chiumbwa Mhuka Sculptur ...
Yakakura White Marble Shumba Zvifananidzo neBhora statu ...
Tsika kadikidiki yakanaka chena ruvara bhiza chifananidzo ...